Luis Suarez Oo Shaaca Ka Qaaday Waxyaabihii Ka Careysiiyay Ee Ay Ku Sameysay Barcelona & Sida Uu Uga Aargoostay | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLuis Suarez Oo Shaaca Ka Qaaday Waxyaabihii Ka Careysiiyay Ee Ay Ku Sameysay Barcelona & Sida Uu Uga Aargoostay
Luis Suarez Oo Shaaca Ka Qaaday Waxyaabihii Ka Careysiiyay Ee Ay Ku Sameysay Barcelona & Sida Uu Uga Aargoostay
Luis Suarez ayaa dareemay inuu u qalmay ixtiraam badan oo uu kala kulmo Barcelona xagaagii la soo dhaafay isagoo shaaca ka qaaday wadahadalkii uu la yeeshay madaxda kooxda ee ka careysiiyay markii ay u sheegayeen sababaha ay u fasaxayaan.
Ronald Koeman ayaa bedelay Quique Setien, kaasoo u cadeeyay Suarez inuusan qeyb ka noqon doonin qorshihiisa.
Suarez oo ah xiddiga hogaaminaya gooldhalinta La Liga xilli ciyaareedkan oo uu la joogo Atletico Madrid ayaa sheegay in Barcelona ay u sheegtay isaga inuu duqoobay oo uusan ka dheeli karin kubada heerkeeda ugu sareeya inkastoo uu 34 jirkaan uu ka aargoostay Barcelona isagoo tusay wacdaraha uu u dhigayo kooxda hogaamineysa horyaalka ee Atletico.
“Waxaan si weyn uga carooday markii ay ii sheegeen inaan duqoobay iyo inaan ka sii ciyaari karin kubada heerkeeda sarre iyo inaan ka hor imaan karin koox weyn. Taas ayaan jecleysanin” ayuu Suarez u sheegay France Football.
Wuxuu hadalkiisa raaciyay: “Haddii aan waxba u qaban laheyn Barcelona seddex ama xilli ciyaareed, waan aqbali lahaa warkooda. Laakiin xilli ciyaareed walba waxaan Barcelona u dhalinayay in ka badan 20 gool. Waxaan mar walba heystay xog fiican, kaliya waxaan ka danbeeyay Leo Messi.
“Maanta waxaan aragnaa inaysan sahlaneyn in loo ciyaaro Barca… ciyaartoy badan oo ay la soo saxiixdeen kama ciyaarayaan heerkii laga filayay. Aniga waxaan Barca u dheelayay lix sannadood oo aan heer isku mid ah ugu ciyaarayay kana soo baxayay wixii la iga filayay.”
Messi oo saaxiibo dhow ay yihiin Suarez ayaa bixitaanka xiddiga reer Uruguay ku tilmaamay waali, halka Suarez uu soo bandhigay inay Barcelona u baahneyd madaama uu 16 gool ku hogaaminayo gooldhalinta La Liga.
Atletico waa waa hogaamiyayaasha La Liga, halka Barcelona ay rafaad ku jirto tan iyo markii uu ka tagay Suarez.
‘Barca xaaladaheeda waa ay isbedeleen, kooxda waxay u baahneyd isbedel” ayuu yiri Suarez.
“Waan aqbalay taas. Waxa kaliya ee aan ka carooday ayaa aheyd sida ay u dhacay, waxaan qabaa inaan u qalmay ixtiraam badan.”